Madaxwayne Muuse Ceeb Maaha Iskaashiga Waddani iyo Ucid Meel Marintaa Mashruuca DP World
Tuesday March 06, 2018 - 14:30:33 in Maqaallo by Reporter Burco
Dadka Somaliland marka ay dawlada u doorteen hoggaanka dalka , waxaa kale ooy hore doorteen nidaaamka aynu ku dhisanahay ee ah dimuqaradiyada.
Kaas oo ku khasbayaa dawlad kasta in dadwaynaha ka tali galiso dawladnimada . Hubaal, hadii dadku doonayaa dawlad hoggaan ku xidhaa sida awrka, doorashabaa kumay mashquulayn. Waxay doonaan lahaayeen nidaam kale , oo sidaa Kililka Shanaad ah ama nidaam askari ah . Tusaale ahaan, Madaxwayne Cabdi Cumar, wuu nasiib badan yahay . Uma baahna inuu cid wax waydiiyo. Wuxuu ka qodi karaa buurta ugu adag dusheeda ceelkuu doonayo, waayo ma jirto cid mayaa odhan kartaa . Waxaa la isku racaay in xagga wax qabadka nidaamka kali taliska ka wanaagsan dimuqraadiyada, laakiin ma raago dhaxalkeedu . Waa sababta aan dooranay inaan si dabiici ah u horumarno, kuna talaabsano horumar dhaxal gal ah , inaga oo mar kasta is waydiinayna halkaan ku socono iyo goortaynu socano.
Maantaa waxaa Somaliland horyaala fulintaa mashruucaa DP World . Taariikhdu inoomay wanaagsanayn muddo badan laakiin maanta waxay inoo gacan galisay fursad aan ina so marin tan iyo maalintaa calanka qaadanay 60 kii. Waxaan u baahanahay maanta in maskax iyo murti intaan isu gayno, u maarayno mashruucan wayn ,una suulin lahayn khilaafka ugu yar ee dhexdeena jiraa . Hadaba dawlada Somaliland waxaa looga baahan yahay in talaabooyinka ay qaadayso si taxadar leh u qaado . Kana baydho wadadii ay u martay ansaxinta heshiiska DP World dawladii hore. Walaw ay fududayd inay baarlamaanka ka ansaxiyaan berigaas oo aqlibayda Kulmiye haystay, hadana waxaa dhacday inay talo xumaysteen oo guushii ay iska shaasheeyeen. Taas oo keentay in golahii sharafta lahaa ay qaylo ka dayaanto sidii caruurtii malcaamadaha . Ficiladaa caynkaas ee degdegu ku jiray hadii dib ugu noqato waxaa suuragal in sida shirkadii Genel faraheena ka bixi doono oo dhici soobi doono mashruucan maanta horteena yaala.
Madaxwayne Muuse, waxaa la gudboonaa in kala tashado madaxda iyo mucaaradkaa arrimaha sidan oo kale u waawayn. Sida hadalkaa ka muuqatay Gudoomiye Cirro , ma diidana heshiiska laakiin waxaa u baahan yahay sharaxaad suaalaha u qabo. Waa in madaxwaynuhu talo la qaataa Waddani, Ucidb, iyo cidii kale ee dalkan qadarin ka mudanbaa.